Maareeyayaasha duubista sawirada sawirada qalabka USB | Laga soo bilaabo Linux
Koonka software-ka waxaa hada ka jira a barnaamijyo kala duwan oo u shaqeeya sidii «Gestores de grabación de imágenes de disco sobre dispositivos USB», Waxaan ula jeedaa, like «Programas de USB inicializables (Booteables)». Waxaa jira kuwo badan oo aad waxtar u leh waxyaabo badan oo lagu daro iyo shaqooyin, kuwa kale oo aan ahayn. Qaar kale oo loogu talagalay hal «Sistema Operativo» iyo kuwa kale oo ah «Multiplataformas».
Kuwa kale oo sida caadiga ah ka shaqeeya inay duubaan dhammaan wixii suurtagal ah «ISOs» de «Linux» iyo sida ay u kala «Gestores de Arranque» iyo kuwa kale oo aan sidaas ahayn, iyo sidoo kale qaar kaliya oo u oggolaanaya noocyada qaarkood «Windows», iyo kuwa kale in midna. Marka, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aragto liiska ballaaran ee jira si aad u doorato midka ugu habboon baahiyahaaga iyo «Sistemas Operativos» isticmaalay.
Marka la soo koobo, badanaa waa kuwo wax ku ool ah oo lagama maarmaan u ah markaan dooneyno inaan fulino matalaad dalwaddii disk ah oo muuqaal ah (Imagen de disco óptico - CD/DVD en formato ISO u otro) gal ah keydinta USB, si iska ilaali inaad lumiso saxan dhab ah oo aan dib loo qori karin (aan dib loo qori karin) ama iska ilaali inay sii xumaato dusheeda.
Waxayna na siinayaan, waxyaabo kale oo badan, labadaba «portabilidad» y «flexibilidad», in lagu qaado hal ama in ka badan sawirada diskiga hal mowduuc ama lagu socodsiiyo kombiyuutarada iyadoon la helin cutubyada akhriska ee warbaahinta indhaha.
1 Barnaamijyo si loo soo saaro USB Bootable
1.2.1 Live MultiBoot USB
Barnaamijyo si loo soo saaro USB Bootable
Waa Software Bilaash ah.
Ma laha is-dhexgal Isbaanish ah.
Ma lahan degel ku hadla af Isbaanish.
Waxaa lagu abuuray teknoolojiyad "Electron".
Waxay leedahay taageero loogu talagalay sawirro isdabajoog ah.
Waxay leedahay interface garaafis ah oo fudud oo fudud in la isticmaalo.
Waxay leedahay ansaxinta duulimaadka si looga hortago duubitaannada musuqmaasuqa ah.
Waxay ka dhigeysaa xulasho otomaatig ah warbaahinta la galiyay oo la galiyay.
Uma oggolaanayso joogtaynta sawirrada diskiga la saaray.
Waxay la timid rakibayaasha Windows, Mac iyo Linux qaabka Appimage.
Waxay leedahay taageero tiro badan oo ah noocyada Windows, Linux iyo Qalabka Diagnostic, Dayactirka, Antivirus iyo kuwa kale.
Waxay leedahay interface ee Isbaanishka.
Waxay leedahay degel ku yaal Isbaanish.
Waxay ku timaadaa nooc la rakibi karo.
Kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan adkeysiga on images disk rakibay.
Waxay la timid rakibayaasha Windows, Mac iyo Linux qaabab kala duwan oo loogu talagalay Qaybinta kala duwan.
Ma laha interface Isbaanish ah.
Waxaa lagu abuuray farsamada "Python".
Waxay la timid rakibayaasha Windows iyo Linux.
Waxay u baahan tahay rukhsad-isticmaale "xidid" rukhsad ah si ay u socoto.
Kudar in kabadan hal muuqaal disk ah. Marka lagu daro tirtirka waqti kasta.
Kuu ogolaanayaa ku adkaysiga sawirada diskka la saaray, laakiin kaliya Ubuntu, Fedora iyo Debian.
Waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'multiplatform' waa:
Live USB Ku rakib
Live MultiBoot USB
Waa asal ahaan Faransiis.
Ma lahan qaab muuqaal ah oo af Isbaanish ah.
Kuu ogolaanayaa jiita / hoos u (jiido / hoos u) image disk on interface garaafyada si loo farsameeyo.
Ka-reebitaanka kale ee Linux waa:
MintStick (Linux Mint gaar ah)
Live-USB-Sameeye (Gaar u ah MX-Linux)
dd-Live-USB (Gaar u ah MX-Linux)
MX-Live-USB-Kan sameeyey (Gaar u ah MX-Linux)
Sidoo kale, xusuusnow taas oo ka timid Linux Operating Systems, waxaad isticmaali kartaa amarka / arjiga la yiraahdo «dd» si loo abuuro a «Unidad USB» si looga dhigo bootin, kaliya adoo muujinaya faylka muuqaalka diskka ee rakibida ama fulinta Nidaamka Howlgalka ee Windows, Linux ama aaladaha kale ee baarista cudurka, Dayactirka, Antivirus iyo kuwa kale.
Waxay leedahay istiraatiijiyad garaaf ah oo Isbaanish ah.
Waxay leedahay nooc lagu rakibi karo iyo nooc la qaadan karo.
Waxay leedahay taageero tiro badan oo ah noocyada Windows iyo Linux. Laakiin waxaad ku dhejin kartaa sawirada diskka Qalabka Baarista, Dayactirka, Antivirus, iyo wixii la mid ah, adigoon helin balanqaad taageero ah.
Waxay leedahay taageero loogu talagalay duubista iyadoo la adeegsanayo qorshayaal kala-sooc ah oo kala duwan, nidaamyada kabaha, nidaamyada faylasha iyo cabbirka kooxaha loo adeegsaday, iyo xulashooyin kale oo badan oo horumarsan.
Waa lacag la'aan.
Waa barnaamijka rasmiga ah ee Microsoft ee loogu talagalay shaqooyinkan oo leh sawirradiisa rasmiga ah.
Waxay ku timaadaa nooc la qaadan karo.
Ma aha barnaamij bilaash ah laakiin waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso oo aad eegto lambarka isha.
Waxay bixisaa awood ay ku soo dejiso qaar ka mid ah sawirada Linux disk-ka la taageero.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dhejiso sawirada aan la taageerin (Faylasha aan la liidi karin ee 'ISOs') laakiin aan lahayn dammaanad qaadasho habboon.
Adeegso "syslinux" si aad ugala soo baxdo sawirada meelaha fidsan ee rakiban, iyo "grub" si aad ugala soo baxdid usha USB-ga, haddii loo baahdo.
Waxyaabaha kale ee Windows looga reebay waa:
ISO ilaa USB
Passcape ISO Gubi
Qoraaga Suse Studio
Zotac WinUSB Kan sameeyey
Sidoo kale, xusuusnow in laga helo Windows Operating Systems, waxaad isticmaali kartaa amarka / arjiga la yiraahdo «diskpart» si loo diyaariyo a «Unidad USB» si looga dhigo bootin, oo kaliya ubaahan in si fudud loo nuqulo feylasha wixii Windows ama Linux ah oo rakibida diskiga ah.
Sameeyaha Disk X
Sidoo kale, xusuusnow in laga helo Mac Operating Systems, waxaad isticmaali kartaa amarka / arjiga la yiraahdo «createinstallmedia» si loo diyaariyo a «Unidad USB» si looga dhigo bootin, oo kaliya ubaahan in si fudud loo nuqulo feylasha wixii Windows ama Linux ah oo rakibida diskiga ah.
Sida aan aragno waxaa jira codsiyo badan oo la heli karo si loo soo saaro «dispositivos USB Booteables». Kuwaas oo aan u adeegsan karno siyaabo aad waxtar u leh, sida kumbuyuutarka oo loo furo marka uusan si otomaatig ah u bilaabi karin sababo la xiriira guul darrooyin aan la tirin karin, sida virus virus, cillad soo wajahda nidaamka qalliinka oo dhinta, disk adag oo si xun u saameynaya ama dhibaato kala sooc. Ama si fudud, bilowga Kumbuyuutarka iyada oo aan lahayn qaybta akhriska maqalka, si aad u qaabeyso ama si fudud u isticmaasho adiga oo aan ka tagin raadadka nidaamka qalliinka ee horay loo rakibay
Laakiin sabab kasta ha noqotee, kuwan yar laakiin codsiyada softiweerka ah ee waxtarka leh ayaa noo oggolaanaya inaan kuwaas isticmaalno «dispositivos USB», ee«alojar (montar)» sawirada disc ka mid ah Nidaamyada Hawlgalka ee aannu ugu jecel nahay inaynu isticmaalno ama rakibno, ama si fudud u isticmaalno qaar kale oo ka mid ah Cilad-baarista, Dayactirka, Antivirus iyo codsi kale oo ku saabsan qalab ama qayb saddexaad.
Xusuusnow, taas weyn (in GB) ama dhakhso (USB 2.X ama USB 3.X) aad «Unidad USB», kuu fiican, iyadoo ay ugu wacan tahay tirada suuragalka ah ee sawirada in la martigaliyo ama waqtiga rakibaadda oo la isticmaalo markaan isticmaalo.
Haddii aad ka heshay maqaalkan ama uu ahaa mid waxtar leh, noo sheeg keebaa codsi aad u jeceshahay shaqooyinkan iyo waayo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Maareeyayaasha duubista sawirada sawirada qalabka USB
Aad baad ugu mahadsantahay shaqadaada, soo uruurin aad u wanaagsan.
Waan sixi lahaa in YUMI uu leeyahay nooc loogu talagalay Lignux, in kasta oo ay ka fogtahay in la cusbooneysiiyo ilaa 2015 - mana fahmin sababta - laga soo bilaabo qaybteeda MS WOS, oo iyaduna hadda ah labo, YUMI UEFI iyo YUMI (Legacy),
Jawaab Miguel Mayol
Waad salaaman tihiin, Miguel. Wanaagsan faalladaada iyo wax ku biirintaada. Hagaag inkasta oo ay wakhtigeedii ka dhamaatay Linux hadana way fiicantahay inaad lahaato isku xirka marinka si aad ugu tijaabiso halka ay wali ku rakiban tahay.
LPI-da weyn ee farshaxankiisa sameynaya, iyo ka takhalusida jahliga uu qofku yeelan karo, wuxuu gabi ahaanba ka warqabin in Rufus uu yahay Software Bilaash ah, sida layaabka leh ee ay sidaa u tahay kuma jirto GNU / Linux ...
Waad salaaman tahay, Carazal. Iyo sida had iyo jeer aad ugu mahadsantahay firfircoonaantaada wanaagsan.
Live USB MultiBoot aad ayuu u fiicnaa laakiin waxaan u maleynayaa in mashruuca laga tagay qaar badan oo ka mid ahna aan si sax ah u socon.
MultiBoot USB waa midka aan aad u jeclahay, laakiin waxaan helay iso oo aan si fiican u socon.
Yumi wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa khamriga waana midka ugu badan ee iso socodsiiya dhib la'aan, laakiin si loo abuuro USB-ga la kici karo markii ugu horeysay waa inuu ka yimaadaa dariishadaha aanan aad u jeclayn.
Waad ku mahadsantahay faalladaada, asrafil.
Wax la mid ah amarka dd. Si dhakhso leh oo fudud.
Xaqiiqdii soon iyo ammaan.
Salaan. Waxa kale oo jira Qoraa Sawireed Rosa. Loogu talagalay Linux iyo Windows. Waxay ila tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
Ku jawaab Matheus
Salaan Matheus, waad ku mahadsantahay faallooyinka wax ku biirinta ...